သက်ဝေ: ကိုကိုနဲ့ ကျွန်မရဲ့ တနင်္လာ
ဆုမြတ်မိုး September 16, 2013 at 12:59 PM
နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ချစ်စရာလေး..ရေးတတ်လိုက်တဲ့ တီသက် <3
ပန်းခရမ်းပြာ September 16, 2013 at 1:02 PM
တနင်္လာနေ့မှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ တနင်္လာပို့စ်ကြောင့် Monday Blue တွေတောင် ပျောက်သွားတယ်။ အဲဒီ ကိုကိုက အမြင် အာရုံ ချို့ယွင်းနေသူလို့ ထင်ပါတယ်။
သက်ဝေ September 16, 2013 at 1:06 PM
ချို... ကိုကိုက အမြင်အာရုံတွေ မချို့ယွင်းနေပါဘူး... အနေဝေးလွန်းလို့ မြင်ဖို့ တွေ့ဖို့ အခွင့်အရေး မရသေးသူ တယောက်ပါ...း-)
မိုးငွေ့........ September 16, 2013 at 2:20 PM
Hmoo September 16, 2013 at 2:22 PM
ဖြူ September 16, 2013 at 5:09 PM
San Htun September 17, 2013 at 2:11 AM
တနင်္လာနေ့ လေးက နူးညံ့လွန်းပြီး ရေးတတ်လိုက်တာ...
ဇွန်မိုးစက် September 17, 2013 at 7:17 AM
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ စာစုလေး။း)
Adora etc. September 17, 2013 at 10:10 AM
စာကြောင်းတိုင်းက အချစ်တွေ၊အလွမ်းတွေနဲ့ နုညံ့လို့။
သိ င်္ဂါရ September 17, 2013 at 3:01 PM
သာသာယာယာ တနင်္လလာ ... :)
အပြုံးပန်း September 17, 2013 at 6:21 PM
ကျွန်မလည်း ဒီလိုလေး ရေးချင်လိုက်တာ။
ဇော်မင်းရွန်းနီ September 17, 2013 at 8:02 PM
ပစ်ပစ် September 20, 2013 at 9:40 AM
အချစ်၇ှိတဲ့တနင်္လာ ဆိုပါတော့ မကြီး
မြသွေးနီ September 20, 2013 at 11:53 AM
နုဖတ်နေတဲ့ ကြည်နူးသိမ်မွေ့နေတဲ့ တနလာင်္လေး..
လသာည September 20, 2013 at 10:36 PM
ဖတ်ရတာ ကြည်နှုးစရာ တကယ်ကောင်းတယ်။
Hmoo September 21, 2013 at 3:20 AM
မိုးသက် October 5, 2013 at 6:02 AM
အိုး.. အဲဒီလို အက်ဆေးရွရွလေးတွေ ဖတ်ရရင် စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်လို့ဗျာ... :))
တန်ခူး October 16, 2013 at 10:46 PM
ကြိုက်တယ်. ကိုကို့ ကိုရော. ကျွန်မကိုရော. တင်္နလာကိုရော. ပြီးတော့ ရေးတတ်လွန်းတဲ့သက်ဝေကိုရော
ponyate October 20, 2013 at 7:39 AM
အစ်မရဲ့ အက်ဆေးလေးတွေက အမြဲ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။